10 Qodob Oo Muhiim U Ah Waraysiga Shaqo - QaranJobs.com - Somali Jobs - somalijobs - qaranjobs - Daily Somalia Jobs
Home/Career Tips/10 Qodob Oo Muhiim U Ah Waraysiga Shaqo
Fiiro gaar ah u yeelo 10 kan qodob isku diyaarinta waraysiga shaqo ee xiga si aad ugu guuleysan karto.
Marka la eego adkaanta suuqa shaqada imika jira, waa in aad u diyaarsanaata waayo haddii kale kuma guuleysankartid tartanka ka jira. Isku diyaari inta karaankaaga ah, ma jirto sii aad u saadaalin kartid waxa waraysiga shaqada kuugu iman kara, laakiin haddaad qodobadan aad raacdid waxa kaa yaraan doona werwerka isla markaana waxa kordhi dona kalsoonidaada. Iska hubi tobankan qodob inta anaad waraysi shaqo kasta tagin.
Baadhis ku bilow:
Baadhista goobta shaqada aad xaraysatay ka hor waraysigaaga baro adeegyada/ alaabta ay bandhigto, macaamiisha ku xidhan iyo tartanka ay ku jirto waxay ku siinayaan awood aad ku fahanto iyo mid aad ku sheegto bahiyaha shirkada. Marka aad wax badan ka ogaato shirkada iyo waxay u tagantahay, waxa badanaya fursadaha aad ku qancin karto dadka ku waraysanaya. Waxa kale ee muhiim ah in aad badhid dhaqanka shirkada ka jira si aad ogaatid in ay kugu haboon tahay amba aanay kugu haboonayn.
Muqaalkaagu ha noqdo mid haboon:
Dooro labiska aad xidhan lahayd adoo eegaya mansabka iyo qaybta aad ka rabtid shaqada. Diyaari labiskaaga ugu fiican haddana hubi in ay nadiif yihin oo ay kaawadaysan yihiin. Markasta waa in aad u eekaato qof habaysan, Waa haddii goobta shaqadu aanay dirays gaar ah kugu xidhin. laakiin wax kasta ka sakow, waa in ad xidhatid maryo aad nafis kutahay oo kalsooni aad ku dareemaysid. If you feel good, others will respond to you accordingly.
Waxaad keentaa folder ay ku jiraan dhawr copy oo kala ah kii CV- ga , ki tixraca iyo mid aad arrimaha muhiimka ah ee laguu sheego Ku qoran doontid. Markasta waa in ay kuu diyaarsanaadaan su’aalo aad waydiin lahayd waraystaha marka uu waraysigu dhamaado.
Marnaba ha kadib dhicin wakhtiga waraysiga. ka yara horee wakhtiga sii aad ka hor tagto caqabadaha kuugu iman kara sida jamka waddada ama inaad goobta waraysiga hore aad u heli waydo. Waxa fiican in aad gaadho goobta waraysiga lagugu qabanayo 10 ila 15 daqiiqo ka hor.
Kalsoonida wax yabaha muujiya waxa ka mid ah xidhiidhka indhaha iyo codka nool. Markasta ku hadal cod kalsooni ku jirto Xitaa haddad werwersan tahay.
Mid ka mid ah xirfaddaha ugu muhiimsan ee badanaa la iloobo waa xirfadda dhagaysiga. Hubi in aadan dhagaysan oo kaliya, laakin in aad hadalka qarsoon ka dhex dheehan kartid. Marmarka qaar hadalka an la odhan wuxuu muhim la yahay sida hadalka loo yidhi.
Ka Jawab Su’aalaha lagu waydiyay:
Badanaa dadka la waraysanyo isku ma dayaan in ay jawaab toos ah su’aasha kaga jawaabaan. Isku day inaad fahanto wixii lagu waydiiyey, faahfahin waydiiso waraystaha haddi aanaad fahmin su’aasha.
Bixi tusaalooyin cayiman:
Hal tusaale oo cayiman ka sheekaynaya khibraddaada aad ledahay baa u dhigmaysa 50 sheeko madmadow ku jiraan. Diyaari hadalka aad waraysiga dhex odhan lahayd. Bixi tusaalooyin muujiya guulaha aad gaadhay iyo wax yabaha aad isleedahay dadka kale waad kaga duwan tahay. Habdhaqankaaga hore wuxuu tusaalo u noqonaya wax qabadkaaga mustaqbalka ah.
Dad badan oo waraysiyo shaqo gala ma waydiiyaan su’aalo waxaanay lumiyaan fursadda ay ku ogaan lahayeen xog muhiim ah. Markaad su’aalo aad waydiisid warastaha waxay muujinaysaa in aad shaqada xiisaynaysid.
Hadday tahay dhinaca email-ka ama sida boostada ah, dabagalka waraysiga waa fursad kale oo aad ku xasuusin kartid dadka waraysiga kaa qaadayay wax yabaha ad ku fiican tahay iyo qimaha aad u kordhin kartid shaqada. Yaanay ku dhaafin fursada ugu danbaysa ee aad isku suuqgayn kartid.